I-Villa View **** I-villa yokunethezeka eMakarska, ichibi langasese
Makarska, Croatia, i-Croatia
U-Croatia Tours unokuphawula okungu-86 kwezinye izindawo.
I-Villa View iyindlu yamaholide yesimanje enechibi elishisayo (33m2) ngaphansi kwentaba i-Biokovo kanye nepaki yayo yemvelo, etholakala kuMfula iMakarska omangalisayo.
I-villa ihlomele kahle, ivulekile, iyasebenza futhi ilungele iholide lomndeni elithandekayo.
I-Villa View iyi-villa kanokusho enechibi elishisayo phansi kwentaba i-Biokovo kanye nepaki yayo yemvelo, etholakala ku-Makarska Riviera emangalisayo. Itholakala endaweni emangalisayo, ethulile futhi yemvelo enezihlahla zikaphayini namasimu omnqumo. I-villa ihlomele kahle, ivulekile, iyasebenza futhi ilungele iholide lomndeni elithandekayo.
Phansi kukhona igumbi lokuphumula elibanzi elinekhishi kanye nefenisha ephezulu. Kwelinye lamathafa amabili (50 m2 no-40 m2) esitezi esingaphansi uzokwazi ukufinyelela echibini elihle le-infinity (33 m2), lapho unombono we-panoramic wedolobha laseMakarska, ulwandle neziqhingi zase Brac futhi Hvar.
Igumbi lokuphumula elibanzi elinekhishi elihlome ngokuphelele litholakala phansi. Ukusuka lapha ungakwazi ukufinyelela ithala kanye nedamu. Le ndlu yamaholide inamagumbi okulala anemibhede ephindwe kabili kanye namagumbi okugezela amane (6 m2 lilinye) esitezi sokuqala. Indlu yeholide inomoya opholile. Le villa enemishini yesimanje inendawo engokwemvelo nokuthula.
Izivakashi zingasebenzisa igceke elikhulu elingaba ngu-500 m2, igaraji nendawo yokugcina izinto, kanye neshawa yangaphandle.
Esitezi esingaphansi ungasebenzisa ilondolo nendawo yokugezela (4 m2, shower).
Kukhona ichibi elihle ethafeni elinombono omangalisayo edolobheni laseMakarska, ulwandle kanye neziqhingi ezimbalwa zaseDalmatian.
I-ID yendlu: CTMA105
Iminikelo eyengeziwe: Ihhavini, I-Microwave, Isitofu, Ikhofi maker, Umshini wokuwasha izitsha, Isiqandisi, I-BBQ Grill, Ishawa, I-WC Ehlukile, Izingane zamukelwa, Ukubuka kwebhishi, Ukubuka kwamanzi, Ukubuka kwentaba, Ukubuka kwedolobha, Ukubhema kuvunyelwe ngaphandle, Ingadi yangasese, Ukubuka kolwandle, Ukuhamba ngebhayisikili , Ukuhamba ngezinyawo , Iklabhu yasebusuku/DJ , Eminye imidlalo , ithenisi yetafula , Inkundla yethenisi , Igumbi lokugezela, Ithoyilethi, Umbhede, Igumbi lokulala, Igumbi lokuhlala, Indawo yokuhlala, Indawo yokudlela, Indawo yokuhlala, Ugesi, Amanzi
IMakarska ingenye yezindawo ezidume kakhulu izivakashi ogwini lwaseCroatia, ekhangayo ngezici zayo zemvelo nesimo sezulu, ukunikezwa kwezivakashi okuhlukahlukene kanye nababungazi abanomoya wokungenisa izihambi. Ngeholide ongasoze walibaleka, sincoma ukuthi uvakashele: Ingxenye endala yedolobha enomgwaqo omkhulu i-Kalalarga kanye nezindawo zokucima ukoma ezingenakubalwa, izindawo zokuphuzela utshwala, izindawo zokudlela kanye namagalari.Isikwele sedolobha esinesonto lika-St. Mark sizungezwe izakhiwo ezindala futhi sibheke phezulu. enye yezintaba ezinhle kakhulu. Intaba Biokovo. Akufanele uphuthelwe yintaba nepaki yemvelo i-Biokovo uma uhlela ukuvakashela eMakarska. Ungahamba uhlelekile ngebhasi elincane, ngemoto yangasese noma uma uthanda ezemidlalo nokuzilibazisa ungahamba ngezinyawo kodwa-ke hhayi ngaphambi kokubonana nehhovisi lepaki yemvelo eMakarska.Iphrojekthi yakamuva e-Biokovo iyindawo yokubuka emise okwesicathulo samahhashi. akhombe ngaphandle kwewa ngengilazi yokuhamba ebizwa ngokuthi i-Skywalk. Itholakala engxenyeni eseningizimu-ntshonalanga ye-Biokovo Nature Park eduze nesikhungo solwazi, endaweni ephakeme ngamamitha angu-1228. Futhi ungahlali ogwini olulodwa nje. I-Makarska Riviera yonke igcwele amabhishi amakhulu, ama-cove amancane, afihliwe okudingeka uwahlole.Ehlobo, idolobha liphinde linikeze uhlelo lokuzijabulisa olucebile olubizwa ngokuthi "Ihlobo laseMakarska". Cela uhlelo lwemicimbi yesikhathi esiceliwe.
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe nosizo lokuhlela iholide lakho, zizwe ukhululekile ukusithinta. Sizokujabulela ukukusiza futhi sikunikeze izeluleko ezinhle kakhulu zokuthi uvakashele ini!
Eduze kwaseduze: Ukubona indawo, Ukuthenga, Izindawo zokudlela, Amamyuziyamu, Ezempilo/i-spa yobuhle, Isikhungo sokufaneleka/ijimu, Ithenisi, Ezemidlalo Zamanzi, Ukubhukuda, Ibhayisikili, Ibhayisikili Lasezintabeni, Ukugibela izintaba, Ukudoba, Ukukhwela idwala, Inkundla yebhola likabhasikidi, Ukumasaji, I-Yoga, Ukuhamba ngebhayisikili , Rafting, Sailing, Hospital
Hlola ezinye izinketho ezise- Makarska namaphethelo